Ganacsiga iyo Tafaariiqda | Bogga 2 ee 131 Martech Zone
Ecommerce iyo Alaabada Tafaariiqda, adeegyada iyo wararka suuqleyda. Is-beddelka beddelaadda, albaabka lacag bixinta, dhoofinta iyo teknoolojiyada kale ee looga hadlay Martech Zone
Teknolojiyada Xayeysiinta Falanqaynta & Tijaabada Content Suuq CRM iyo Aaladaha Xogta Ganacsiga iyo Tafaariiqda Suuqgeynta Emailka & Suuqgeynta Suuqgeynta Emailka Teknolojiyada soo ifbaxaya Suuq geynta Fiidiyowyada Suuqgeynta & Iibka Buugaagta Suuqgeynta Dhacdooyinka Suuqgeynta Macluumaadka Suuqgeynta Aaladda Suuqgeynta Tababarka Suuq geynta Martech Zone Apps Suuqgeynta Mobilada iyo Mashiinka Xiriirka Dadweynaha Kordhinta Iibka Suuq Goobid Media Social Suuq
Nudgify: Kordhi Beddelaaddaada Dukaameysi leh Madalkan Caddaynta Bulshada ee Isku -dhafan
Axad, Agoosto 29, 2021 Axad, Agoosto 29, 2021 Douglas Karr
Shirkadayda, Highbridge, ayaa ka caawineysa shirkad fashion ah inay soo saarto istaraatiijiyadeeda tooska ah ee macaamilka gudaha. Sababtoo ah waxay yihiin shirkad dhaqameed oo kaliya bixisa tafaariiqleyaasha, waxay u baahdeen lammaane gacan ka geysan doona inuu noqdo cududda teknolojiyadooda oo ka caawisa dhinac kasta oo ka mid ah horumarintooda sumcad, ecommerce, lacag bixinta, suuqgeynta, beddelidda, iyo hababka dhammaystirka. Sababtoo ah waxay leeyihiin SKU -yada xaddidan oo aan lahayn summad la aqoonsan yahay, waxaan ku riixnay inay ku bilaabaan madal diyaar ah, la cabbiri karo, oo
Arbacada, Agoosto 25, 2021 Arbacada, Agoosto 25, 2021 Douglas Karr
Taxaddarrada ay sameeyeen shirkaduhu intii ay socdeen aafadu waxay si weyn u carqaladeeyeen silsiladda sahayda, habdhaqanka iibsashada macmiilka, iyo dadaalladeenna suuqgeynta ee la xiriira dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Fikradayda, macaamilka iyo isbeddellada ganacsi ee ugu weyn ayaa ka dhacay dukaamaysiga onlaynka ah, bixinta guriga, iyo lacag -bixinnada moobaylka. Suuqgeeyayaasha, waxaan aragnay isbeddel weyn oo ku soo noqoshada maalgashiga tiknolojiyadda suuqgeynta dhijitaalka ah. Waxaan sii wadnaa inaan wax badan qabanno, kanaalno badan iyo dhexdhexaadiyayaal, oo aan haysanno shaqaale yar - annaga noo baahan
Sida Loo Kordhiyo Ka Qaybgalka Xilliga Fasaxa Iyo Iibinta Qaybta Liiska Emailka
Talaado, Agoosto 17, 2021 Talaado, Agoosto 17, 2021 Douglas Karr
Qaybta liiska emaylkaaga ayaa kaalin muhiim ah ka qaadata guusha olole kasta oo emayl. Laakiin maxaad samayn kartaa si aad uga dhigto dhinacan muhiimka ah mid ku anfaca inta lagu jiro fasaxyada - waqtiga ugu faa'iidada badan sannadka ganacsigaaga? Furaha kala -soociddu waa xog… sidaa darteed bilawga qabashada xogtaas bilaha ka hor xilliga fasaxa waa tallaabo muhiim ah oo horseedi doonta ka -qaybgalka iimaylka iyo iibinta weyn. Waa kuwan dhowr
Sida Loogu Kordhiyo Wakaaladaada Iskuduwaha Dukaankaaga Shopify
Talaado, Agoosto 3, 2021 Talaado, Agoosto 3, 2021 Douglas Karr
Marna hay'adahaaga ha siin aqoonsi gelitaankaaga aaladahaaga. Waxaa jira waxyaabo aad u badan oo khaldami kara markaad sidan samayso - laga bilaabo furaha sirta ah si aad u hesho macluumaadka aysan ahayn inay helaan. Inta ugu badan ee aaladaha maalmahan waxay leeyihiin habab loogu daro isticmaaleyaasha ama la -shaqeeyayaasha madashaada si ay u yeeshaan awoodo xaddidan oo laga saari karo marka adeegyada la dhammeeyo. Shopify ayaa tan si fiican u sameeya, iyada oo loo marayo marin hayaha iskaashi ee
Jimco, Juun 30, 2021 Jimco, Juun 30, 2021 Jui Bhatia
Warshadaha tafaariiqdu waa warshad aad u weyn oo qabata hawlo iyo hawlo badan. Qoraalkan, waxaan kaga hadli doonnaa isbeddellada ugu sarreeya ee software tafaariiqda ah. Annaga oo aan sugin wax badan, aan u dhaqaaqno xagga isbeddellada. Ikhtiyaarada Bixinta - Boorsooyinka dhijitaalka ah iyo irridaha lacag bixinta ee kala duwan ayaa isku daraya dabacsanaanta lacag bixinta onlaynka ah. Dukaanleydu waxay helaan hab sahlan oo ammaan ah si ay u buuxiyaan shuruudaha lacag bixinta ee macaamiisha. Hababka dhaqameedka, lacag caddaan ah oo keliya ayaa loo oggol yahay bixinta